धुम्रपान त्याग्ने योजना बनाउनुभएको छ ? त्यसो भए यस्तो तरिका अपनाउनुहोस् | Pahara Nepal
धुम्रपान त्याग्ने योजना बनाउनुभएको छ ? त्यसो भए यस्तो तरिका अपनाउनुहोस्
काठमाडौं – धुम्रपान लत लागिसकेपछि छोड्न त्यती सजिलो हुदैँन । निश्चय नै यसको लागी आत्मबलको खाँचो पर्दछ । जसले आफ्नो मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन त्यसले चाहेर पनि धुम्रपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थहरुको सेवन त्याग्न सक्दैन ।
धुम्रपान गर्न मन लाग्ने चाहाना रहित वातावरणको सृजना गर्ने त्यसका लागी धुम्रपान सम्बन्धि सामाग्रीहरु चुरोट, सलाई, एष्ट्रे आफुसँग नराख्ने ।